5 အကောင်းဆုံး Cable ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု Solutions
Huawei သည် ၎င်း၏ လူအများ စောင့်မျှော်နေသော အဆင့်မြင့် HUAWEI P50 Pro နှင့် HUAWEI P50 Pocket ကို UAE တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Acer သည် ပညာရေးအတွက် တာရှည်ခံ Chromebook လေးခုဖြင့် သင်ယူမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
Lamborghini Countach LPI 800-4 သည် လမ်းပေါ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
24 / 05 / 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသည့်ခေတ်တွင်နေထိုင်သည်။ Gadgets များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့်အလုပ်များကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ဦး တည်စေပြီးနည်းပညာအသစ်များနှင့်ဒီဇိုင်းနည်းစနစ်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူ gadget များသည်လည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သော gadget များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာကြိုးဖြစ်သည်။
Wires and Cables သည် gadget များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြားအရေးကြီးသောဆက်သွယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကေဘယ်ကြိုးများ၏အသုံးချပုံနမူနာများမှာ -
ကြိုးမဲ့နည်းပညာသည်တဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ဖြစ်လာသည်၊ သို့သော်ထိုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကေဘယ်လ်များနှင့်အတူနေထိုင်ရန်လိုအပ်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုးများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်၎င်းတို့အားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မရောနှောစေရန်တားဆီးထားပါသည်။
ဖြေရှင်းချက် 1. Cable ကိုလက်နှင့်ပြွန်
ဖြေရှင်းနည်း ၃။ Cable Organizer Tray အောက်တွင်
ဖြေရှင်းချက် 5. Cable ကိုကြိုး
သင့်တွင်ပတ် ၀ န်းကျင်အရံပစ္စည်းများစွာပါ ၀ င်သောတီဗီတီဗွီရှိသော်လည်းနံရံနှင့်ရောနှောနေရန်ဝါယာကြိုးကိုဖုံးကွယ်ထားလိုလျှင်သင်သည် Cable Sleeves များရရှိသင့်သည်။ ဤရွေ့ကားအင်္ကျီလက်များသည်အလွန်တတ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းနောက်ကွယ်မှနံရံကိုအလွယ်တကူရောစပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်သည်။
နောက်ထပ်ဖြေရှင်းချက် bendable Tube ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၁၆.၉၉ ၀ န်းကျင်သာ ရှိ၍ ၎င်းတို့သည် ၁၉ လက်မအရွယ်ရှိပြီးဇစ်များပါရှိသည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာကြိုးတွေကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်သူတို့ကို zip နိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်အလုပ်များနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းများအတွက်နားကြပ်များသည်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။ နားကြပ်အမျိုးမျိုးသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ setups များကိုတန်ဆာဆင်ကြသည်။ ကြိုးမဲ့နားကြပ်များစားပွဲပေါ်၌သန့်ရှင်းစွာကြည့်နေစဉ်သူတို့၏ကြိုးနှောင်ထားသောမောင်နှမများသည်မည်သည့် setup ပေါ်တွင်မဆိုရှုပ်ထွေးနေတတ်သည်။ နားကြပ်ရပ်များလှုပ်ရှားမှုသို့ရောက်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ သင်၏နားကြပ်ကိုချိတ်ဆွဲရန်တည်ငြိမ်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုသာမကဘဲအရာဝတ္ထုများကိုသန့်ရှင်းစေရန်သင်၏ရပ်ကွက်ပတ်လည်ရှိကေဘယ်ကြိုးကိုလည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဘတ် Windows 10 ကိုဘယ်လို Factory Reset လုပ်မလဲ
သင် high-end gaming setup ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ သင့်မှာ wires တွေအများကြီးစားပွဲပတ်ပတ်လည်မှာရှိနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ Desk cable cable organizer tray အောက်တွင် cable များအားလုံးကိုစားပွဲအောက်၌စုစည်းထားရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
ဤအခြေအနေသည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းရုံသာမကရေရှည်တွင်နားကြပ်များကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။ နားကြပ်များသည်ဝါယာကြိုးများကိုရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်နားကြပ်ကိုလုံခြုံစွာထားခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုရန်အတွက်သူတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးလုပ်ရလွယ်ကူသည်။
၎င်းတို့သည်ကေဘယ်ကြိုးများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့်အလွယ်တကူကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်သည်။ Cable connection သည်ရိုးရှင်းသော tags များဖြစ်ပြီးသင်၏ဝါယာကြိုးများပတ်ပတ်လည်၌ချည်နှောင်ထားနိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုသော့ခတ်လိုက်သည်နှင့်၎င်းတို့ကိုကတ်ကြေးများဖြင့်ဖြတ်တောက်ပါက၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်သည်ပစ္စည်း ၁၀၀ ကိုဒေါ်လာ ၆.၉၉ ဖြင့်သာရရှိမည်၊ ၎င်းမှာကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊
ဒါကြောင့်ဒါတွေဟာသင်စျေးကွက်ထဲအလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး BEST cable စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်း ၅ ခုဖြစ်တယ်။
လွန်ခဲ့သော Facebook Messenger မှာစကားပြောဆိုမှုကိုလျစ်လျူရှုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
နောက်တစ်ခု Android နှင့် iOS ပေါ်တွင်ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်နည်း